News Collection: 'सामान्य ठेलमठेल' मा नौ वटा माइक खत्तम
'सामान्य ठेलमठेल' मा नौ वटा माइक खत्तम
शुक्रबारको रात संसदमा गएको घटनालाई माओवादीले ‘सामान्य ठेलमठेल’ मात्रै भनेको छ। हो रहेछ। ‘सामान्य ठेलमठेल’ भएकैले त यति कम क्षति भएको ! संसद सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले क्षतिको विवरण दिएका छन् आज। जम्माजम्मी नौ वटा ‘डेलिगेट्स माइक’ र चारवटा टेबलमा क्षति पुगेको रहेछ। अनि २ वटा ‘स्ट्याण्ड माइक’ पनि हराएछ। अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेश त तोडफोड भएको यसअघि नै प्रचारमा आएको छ।
त्यो घटनामा माओवादीले कुटे भनेर काँग्रेस-एमालेका मन्त्रीहरुले बताए। अनि माओवादीले त्यत्रो उपद्रो मच्चाउँदा पनि किन अरुले बचाउ नगरेका वा प्रतिकार नगरेका भन्ने पनि लागेको होला।
यसको जवाफ ऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महतलाई कुटेको भनेर पत्रिकामा नाम छापिएका माओवादी सभासद तथा पूर्वमन्त्री लेखराज भट्टले दिएका छन्। उनले भनेका छन्- सरकारले संविधान मिच्न हुने, हामीले चाहिँ टुलुटुलु हेर्ने हुन सक्छ ? त्यति त सामान्य हो। प्रतिवाद भएको भए संसदमा के हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई नै थाहा थियो।
आज प्रकाशित नेपाल समाचारपत्रमा भट्टले त्यसो भनेका हुन्। अनि मन्त्री कुट्न अग्रभागमा रहेका भन्दै नाम नखुलाइएका सभासदले समाचारपत्रलाई यसो भनेछन्- हामीसँग भिड्न खोजेको भए त्यो रात संसद् रक्तपातमा परिणत हुन सक्थ्यो। किनकि त्यहाँभित्रका मर्यादापालक हामी लडाकूका लागि केही पनि होइनन् र त्यसको पनि आँकलन गरिसकेका थियौं।
समाचारपत्रका अनुसार शुक्रबार राति १० बजे व्यवस्थापिका संसद्को पहिलो बैठकपछिको दोस्रो बैठकको बीचमा बाँकी रहेको १० मिनेटमा संसद्को एउटा लबीमा माओवादीका सभासद्हरु बसी योजना बनाएका रहेछन्। योजना यस्तो बनेको रहेछ- बजेट प्रस्तुत गर्न अर्थमन्त्री आफ्नो कुर्सीबाट उठ्नासाथ मन्त्रीलाई हस्तक्षेप गरी ब्रिफकेस खोस्ने, जबरजस्ती बल प्रयोग गर्ने र त्यसो गर्दा मर्यादापालक प्रयोग गरिए वा अन्य दलका सभासद् प्रतिवादमा उत्रिए बैठकभित्रै घेराबन्दी गरी कुट्ने।
धन्न, त्यस्तो केही भएन। सभामुखले मर्यादापालकलाई स्थिति नियन्त्रणमा लिन अह्राएनन्- माननीय सदस्यहरु, माननीय सदस्यहरु आफ्नो कुर्सीमा बस्नुस् मात्रै भनिरहे। अनि अरु दलका सभासदहरु पनि प्रतिकारमा उत्रिएनन्। नत्र अरु देशको संसदमा भएको भन्दा खतराको भिडियो आउँथ्यो संसदभित्रको।
त्यसैले त माओवादीले भनेका- कुटपिट भएको हैन ‘सामान्य ठेलमठेल’ मात्र भएको !
जे भयो राम्रैका लागि भयो। यो घटनाले सबैलाई राम्रै भएको छ। माओवादीलाई विस्तारित बैठकमा आफू अझै क्रान्तिकारी रहेको, देख्यौ हामी बुजुर्वा संसदीय व्यवस्थाको भासमा डुब्न गएका हैनौँ, उस्तै परे कुट्न नि सक्छौँ भन्न पनि भयो। सरकारलाई यही बहानामा अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याउन पनि भयो। सात फुच्चे दलहरुको कामचलाउ सरकारले राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ फुकाएर एकै दिनमा संविधान संशोधन पास गराउन पाइँदैन भन्ने माग पनि पूरा भयो। संसदको अधिवेशन अन्त्य भएपछि त्यो अधिवेशनमा राखिएको प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रस्ताव पनि स्वतः खत्तम भयो, बारम्बार कसैले नजित्‍ने निर्वाचन हेर्नबाट पनि बचियो। अब प्रधानमन्त्री निर्वाचनको नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने तर्क गर्नेहरुलाई पनि बल पुग्यो। त्यसैले बेकारमा ठूल्ठूला चिन्ता गर्न जरुरी छैन यो ‘सामान्य ठेलमठेल’ को।